maapuro & apos; s anorova powerbeats pro yechokwadi wireless mahebhu iye zvino ari nzira yakachipa kwazvo kuti arambe
Kuru Nhau & Ongororo Apple & apos; s Inorova Powerbeats Pro yechokwadi isina waya nzeve dzave ikozvino nzira yakachipa kwazvo kuramba
Kana iwe & apos; tiri mumusika weanodhura maviri eanofambisa echokwadi asina waya nzeve, tinogona kunyatsonzwisisa kuti nei iwe & apos; d uchirambidza Apple & apos; s dzakawanda dzakakurumbira sarudzo dzakanyanya kunaka kubva pabhati. Kunyangwe isu & apos; tichitaura nezve maapos; akajairwa ' wechipiri-gen AirPods kana iyo yepamusoro-kumagumo Pro modhi , it & apos; zviri nyore kuwana dzimwe nzira dzinodhura dzine dzakaenzana kana zvisiri zvemhando yepamusoro uye kugona kunoitwa nemakambani akati wandei.
Zviripachena, zvakafanana zvinoenda kune Beats-yakashambadzirwa Powerbeats Pro , iyo inowanzo mutengo pamutengo unokwikwidza $ 249.99 ine dhizaini dhizaini, stellar bhatiri hupenyu, uye zvakanyanyisa kusaenzana kusagadzikana munzeve dzako.
Asi zvitende kana kwete, kana ukamhanyisa, unogona kuzviwana Apple -vakaita vakomana vakaipa paupengo hwepasi $ 89.99 mapaundi mushure mehombe $ 160 dhisikaundi. Iwe unongova nemaawa mashoma mashoma panguva yekunyora kudhonza chikungiso, uye kana iwe & apos; uchizvibvunza, ehe, pane 'kubata' iwe kwaunofanirwa kufunga usati wafunga kuti iyi mhondi chibvumirano chitsva chakakukodzera .
Inorova Powerbeats Pro
Totally Wireless Nzeve, Chitubu Yero, Certified Yakagadziridzwa
$ 8999$ 24999 Yapera
Kunyanya, iwe & apos; iwe uchafanirwa kugadzirisa iyo yakagadziridzwa Moss-yakavharwa yuniti kana iwe uchida kusevha izere zvataurwa pamusoro 160 madhora, akapupurirwa neBest Buy kuti ishande zvisina tsananguro uye inotaridzika seyakanaka senge nyowani mushure ma & apos; zvakakwana, kunetseka, uye rudo ' maitiro ekuyedza.
Sezvo iyo nyowani-nyowani, isina kushandiswa, isina kuvhurwa, uye isina kukanganisika Powerbeats Pro ichiri kuwanikwa chero kupi pakati pe $ 150 ne $ 200 kubva kuvazhinji vatengesi veUS mune akasiyana siyana emhando sarudzo, isu tese tinogona kubvuma uyu unbeatable $ 90 mutengo unoita iyo yakasimbiswa kugadziridzwa ' kubvumirana 'zvakakodzera kukosha.
Usakanganwe kuti isu & apos tiri kutaura nezve mamwe akasimba (uye anodakadza kushamisika) sweat-resistant wireless earphones pano inokwanisa kuchengeta mamhanzi ako aunofarira achienda kweanopfuura maawa e9 pane imwechete kubhadharisa uchitora izvo zvinonakidza kutsungirira mamaki pamusoro iyo yakasanganiswa makumi maviri nemaawa chiratidzo. Hazvina kushata pachigadzirwa chinodhura-chinodhura icho zvakare chine Fast Fuel yekuchaja tekinoroji uye imwechete Apple H1 chip seyechipiri-gen AirPods inoenda nayo, eh?
iphone senge keyboard yeiyo android
mashandisiro eSim eject chishandiso
8 yeakanakisa ekunze GPS mamamepu maapplication eApple
Maitiro ekupfura mapikicha emanheru manheru pane yako iPhone 11, iPhone 11 Pro, uye iPhone 11 Pro Max
Apple CEO VaTim Cook vanozove vemahara mumiriri mukupera kwegore rinouya
Samsung Gear Fit 2 Pro inodhura kupfuura gore rapfuura & apos; s Gear Fit